Shiinaha Dhalista dareeraha heerkulka baadiyaha Soo saaraha
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka dareeraha > Qaadista dareeraha heerkulka baadiyaha
dhamaadka dareemaha heerkulka caabbinta wajiga
Qiyaasta heerkulka waa in lagu sameeyaa meel u dhow dusha shayga la cabirayo. Iyada oo leh cabbirka heerkulka saxda ah iyo rakibidda tooska ah, waxaa loo isticmaalaa cabbirka heerkulka ee suufka riixitaanka, stator fuulista, xudunta birta, farta cadaadiska iyo qolofka baska ee ku lifaaqan.
shidma heerkulka shidma dunmiiqa
Cabbiraadda heerkulka ee shaabadda dunmiiqa marawaxadaha biyaha, waxay ogaan kartaa bixitaanka khadadka keli ah ee derbiga jeexjeexa saliidda iyo derbiga haanta biyaha iyada oo aan loo baahnayn isku xirnaan.
Waxaa lagu dabaqay dabagalka suufka iyo heerkulka saliida marawaxadaha biyaha. Iyada oo laga jawaabayo saameynta socodka saliidda ee xaaladaha adag, qalabka ilaalinta siligga sheathed sheathed wuxuu ka hortagi karaa dhaawaca adag ee uu keeno gariirka farsamada.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Qaadista dareeraha heerkulka baadiyaha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Qaadista dareeraha heerkulka baadiyaha kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.